ESI EWEPỤ VKONTAKTE EZIGBO NDỊ ENYI - VKONTAKTE - 2019
Esi ewepụ VKontakte ezigbo ndị enyi
Iji ozi mail.Ru na-arụ ọrụ nke ọma ma na ihe nchọgharị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ na e-mail site na iji ngwanrọ kwesịrị ekwesị, ị ga-enwe ike ịhazi ya n'ụzọ ziri ezi.
N'isiokwu a, anyị ga-elele otu esi ahazie otu n'ime Bat! izipu ma nata ozi si mailbox Mail.ru.
Hụkwa: Ịtọlite ​​Yandex.Mail na Bat!
Dezie mail Mail.ru na Bat!
Na iji Bat! nata na izipu akwụkwọ ozi site na iji mailbox Mail, a ga-agbakwunye ya n'usoro ihe omume ahụ, kọwaa njedebe nke ọrụ ahụ.
Họrọ protocol mail
Mail.ru, n'adịghị ka ọrụ email ndị dị otú ahụ, site na ndabara, na-akwado niile usoro mgbanwo ozi ugbu a, ya bụ POP3 na IMAP4.
Ịrụ ọrụ na sava nke ụdị mbụ n'ime ihe ndị dị ugbu a bụ nnọọ ihe na-adịghị njọ. Nke bu eziokwu bu na usoro POP3 abiala ugbua nke ugwo maka inweta ozi, nke adighi adi na otutu oru di na ndi ahia ugbua. Nakwa, iji usoro a, ị gaghị enwe ike ịmekọrịta ozi na igbe akwụkwọ ozi na ngwaọrụ dị iche iche.
Ọ bụ ya mere Bat! anyị ga-ahazi iji rụọ ọrụ na Mail.ru IMAP-server. Usoro kwekọrọ ekwekọ dị ugbu a na arụ ọrụ karịa otu POP3.
Dezie onye ahịa
Iji malite na-arụ ọrụ na mail na Bat !, Ịkwesịrị ịgbakwunye igbe ozi email ọhụrụ na oghere ọnụọgụ ụfọdụ maka usoro ihe omume ahụ.
Iji mee nke a, mepee ahịa ma họrọ mpaghara nhọrọ "Igbe".
Na listi ndetu ka pịa ihe "New igbe akwụkwọ ozi dị ...".
Ọ bụrụ na ị na-amalite usoro ahụ maka oge mbụ, ịnwere ike ịkwụsị ihe a n'enweghị nsogbu, ebe ọ bụ na onye ọrụ ọ bụla na Bat! Na-akwado usoro maka ịgbakwunye igbe ozi e-mail.
Ugbu a, anyị ga-ezipụta aha anyị, adreesị ozi-e na paswọọdụ gị na igbe ahụ kwekọrọ. Nhọrọ "IMAP ma ọ bụ Pop" na ihe ndepụta ndepụta "Usoro".
Dejupụta mpaghara niile, pịa "Na-esote".
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịmepụta nnata nke ozi na kọmputa na onye ahịa. Mgbe mgbe, ọ bụrụ na anyị ejiri protocol IMAP, taabụ a anaghị achọ mgbanwe. Otú ọ dị, nkwenye nke data ndị a agaghị emebi anyị.
Ebe ọ bụ na anyị kpebiri ịrụ ọrụ na mail Mail.ru IMAP, ebe a na mpaghara mbụ nke parameters anyị na-egosipụta bọtịnụ redio "IMAP - Internet Mail Access Protocol v4". N'ihi ya, adreesị ozi-e kwesịrị ịtọ ya dị ka ndị a:
Nkebi "Njikọ" dị ka "TLS"na n'ọhịa "Port" enwere nchikota «993». Ngalaba abụọ ikpeazụ, nke nwere adreesị ozi-e na paswọọdụ anyị na igbe ahụ, ejupụtala na ndabara.
Ya mere, oge ikpeazụ ị na-ele anya n'ụdị ntọala ozi-abata, pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Na taabụ "Ozi na-apụ apụ" enwekarị ihe niile edozila nke ọma. Otú ọ dị, ebe a maka ịtụle ihe niile.
Ya mere, n'ọhịa "Adreesị nke ihe nkesa ozi ọpụpụ" A ga-edepụta akara na-esonụ:
N'ebe a, dị ka ọ bụrụ na ọ bụ ozi na-abata, ozi nzi ozi na-eji usoro kwesịrị ekwesị maka izipụ akwụkwọ ozi.
Na paragraf "Njikọ" họrọ otu nhọrọ - "TLS", na ebe a "Port" kwue ka «465». Ọfọn, checkbox banyere mkpa maka nyocha na SMTP nkesa kwesịrị ịbụ na arụ ọrụ ala.
Lelee data niile, pịa "Na-esote"ịga nhazi nhazi ikpeazụ.
Tab "Ozi Akaụntụ" anyị (yana mmalite usoro usoro ntọala) nwere ike ịgbanwe aha anyị site n'aka ndị nnata akwụkwọ ozi anyị, yana aha igbe ozi igbe, nke anyị na-ahụ na nchekwa osisi.
A na-atụ aro nke a ka ị hapụ nsụgharị mbụ - n'ụdị adreesị email. Nke a ga-eme ka ọ dịkwuo mfe ịnya ozi-e mgbe ị na-arụ ọrụ na ọtụtụ igbe n'otu oge.
Izizi, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ihe fọdụrụ nke onye ahịa mail, pịa "Emere".
Mgbe ịga nke ọma na-agbakwụnye igbe akwụkwọ ozi na ihe omume ahụ, anyị nwere ike iji Bat! maka ọrụ dị mfe ma dị nchedo na ozi e-mail na PC gị.